Madaxwayne Shariif oo baaq u diray ciidamada DKMG, booqdayna furumaha dagaalka | raascasayrmedia.com
← Rag la sheegay inay yihiin argigixiso oo lagu qabtay Gaalkacyo
Naadiga Barcelona oo Arsenal ka reebtay koobka Horyaalada qaarada →
March 9, 2011 · 6:38 pm
Madaxwayne Shariif oo baaq u diray ciidamada DKMG, booqdayna furumaha dagaalka
Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu baaqay ciidamada dowladda in sida ugu dhaqsiyaha badan ay magaalada Muqdisho ugu saaraan Shabaab, isagoo maanta booqday furumaha hore ee dagaalka.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya oo maanta booqday furumaha hore ee dagaalka ee qeybo ka mid ah Muqdisho ayaa ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM waxaa ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan magaalada Muqdisho ay kaga saaraan Xarakada Al Shabaab.
Madaxweyne Shariif ayaa socdaal waxaa uu ku maray Tarbuunka, Taleex iyo xaafado ku yaala degmooyinka Howlwadaag iyo Wardhiigeleey oo ay isku horfadhiyaan ciidamada Al Shabaab iyo kuwa dowladda KMG Soomaaliya.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay qaadeen talaabooyin Milatari oo uu sheegay inay ka gaaraan dagaalada, wuxuuna intaasi ku daray in loo baahanyahay in la’is raaciyo guud ahaan magaalada Muqdisho oo lasoo galiyo gacanta dowladda KMG Soomaaliya.
Shariif ayaa waxaa uu tacsi u diray dhamaan dadkii wax ku noqday howlgalkii ciidamada dowladda ay ku qaadeen fariisimaha ciidan ee Xarakada Al Shabaab ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho, isagoo sidoo kale tilmaamay in uu aad uga xunyahay askriitii ciidamada AMSIOM iyo kuwa dowladda ee ku dhintay dagaalada ugu dambeeyay ee ka dhacay Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa uu ugu baaqay Shacabka Soomaaliyeed inay garab siiyaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda KMG oo uu tilmaamay in howlgal Milatari oo ka dhan ah Shabaab ay ka wadaan magaalada Muqdisho.
Ugu dambeyn ayaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaa uu ku baaqay in la sabro oo la dulqaato inta ciidanka dowladda ay sii wadaan howlgalada ilaa iyo dalka laga saarayo Shabaab, isagoo ku booriyay inay garab istaagaan ciidamada Amaanka ee dowladda KMG iyo ciidamada AMISOM.
Hadalka Madaxweynaha oo ku aadanaa in ciidamada dowladda KMG sida ugu dhaqsiyaha badan ay kusoo gacan galiyaan magaalada Muqdisho ayaa waxaa kusoo beegmaayaa xili inta badan Xarakada Shabaab ay wali gacanta ku hayaan Muqdisho dagaaladuna ay yihiin kuw socda.